Striatal Dopamine D2 /3Receptor ရရှိနိုင်သောကုသမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောစိတ်ကျရောဂါ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်။
Dopamine & စိတ်ကျရောဂါ
ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စီးပွားပျက်ကပ် (2) တွင် Striatal Dopamine D3 / 2015 receptor ရရှိနိုင်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(11): e113612 ။
2014 နိုဝင်ဘာ 20 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0113612
Bart P. က de Kwaasteniet,#1,2,* Chedwa Pinto,#3 အဲရစ် HG Ruhé,1,2,6 Guido အေဗန် Wingen,1,2 ဇန်နဝါရီ Booij,2,4 နှင့် Damiaan Denis1,2,5
Huaibin Cai, Editor ကို
ဤဆောင်းပါးသည်တညျ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PLoS တစ်ခုမှာကြည့်ရှုပါ။ 2015 သြဂုတ်လ 13; 10 (8): e0135764 ။
အများအပြားကလေ့လာမှုများ TRD အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ dopaminergic neurotransmission အကြံပြုထားတဲ့ dopamine agonists စီမံခန့်ခွဲပြီးနောက်ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါ (TRD) တွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုးတက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် dopaminergic ၏အခန်းကဏ္ဍကို: D striatal dopamine ၏တိုင်းတာခြင်းမှတစ်ဆင့်အချက်ပြ2 /3အဲဒီ receptor (D2 / 3R) binding TRD ဘာသာရပ်များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ကျနော်တို့ [အသုံးပြုသော123ငါ] TRD အတွက် binding striatal D2 / 3R စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် IBZM တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography (SPECT) ။ ပြင်းထန်တဲ့ TRD လူနာ ၆ ယောက်၊ antipsychotics ဆေးပြင်းထန်တဲ့ TRD လူနာ ၁၁ ယောက် (TRD AP group) နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှု ၁၅ ခုပါဝင်တယ်။ ရလဒ်များအနေဖြင့် TRD လူနာများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများအကြား striatal D6 / 11R ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (p = 15) ကိုပြသခဲ့သည်။ TRD AP အုပ်စုတွင် D0.75 / 2R ရရှိနိုင်မှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည် (antipsychotics က D3 / 2Rs ၏ထေရ ၀ ါဒကိုထင်ဟပ်သည်) TRD လူနာများနှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများ (p <3)၊ သို့သော် TRD AP နှင့် TRD လူနာများအကြားလက်တွေ့လက္ခဏာများတွင်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ဤသည်မှာပဏာမလေ့လာမှုထို့ကြောင့်ပြင်းထန် TRD လူနာ D2 /3ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုဒီ TRD အဖွဲ့ခွဲပြောင်းလဲ dopaminergic ဂီယာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ပါအကြံပြုမထားဘူး။ Atypical antipsychotics D2 / 3Rs သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ထေိုရှိနေသော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကျန်ကြွင်းသောပြင်းထန် TRD လူနာမလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ဖို့ပေါ်လာ.
အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ (MDD) နဲ့လူနာအကြောင်းသုံးပုံတစ်ပုံစိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းနှင့်အတူနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစမ်းသပ်မှုတွေတုံ့ပြန်ကြဘူးနှင့်ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စဉ်းစားနေကြတယ် , ။ ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါ (TRD) အနေနဲ့ခြုံငုံပိုဆိုးဟောကိန်းနှင့်မြင့်မားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်သည် ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာအနည်းငယ်သာ TRD ၏ pathophysiology အကြောင်းကိုလူသိများသည်, TRD ဘာသာရပ်များအတွက်သို့သော်အများအပြားလေ့လာမှုများ dopamine agonists နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုးတက်မှုသရုပ်ပြ -။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ထို့ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော dopaminergic neurotransmission TRD ၏ pathophysiology အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအကြံပြု .
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထစ်အငေါ့ dopaminergic neurotransmission လည်းအလုပ်မဖြစ်ဆုလာဘ် / စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များနှင့် anhedonia နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ အပျော်အပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကြွင်းမဲ့အာဏာသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ Anhedonia MDD ၏ရောဂါများအတွက်လိုအပ်သောနှစ်ခု key ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။ TRD ခုနှစ်, anhedonia မကြာခဏပိုပြီးလေးနက်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲနှင့်ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ် / စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များတစ်ချို့တဲ့နှင့်ဆက်နွယ်။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဓိကဦးနှောက် dopaminergic ဝစောတဦးဖြစ်သည့် mesolimbic စနစ်, ကကမကထပြုခဲ့ကြသည် ။ ဤသည် mesolimbic ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပါ (နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်) ventral striatum, hippocampus နှင့် amygdala ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်စီမံကိန်းများအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက်။
အတော်လေးအနည်းငယ် neuroimaging လေ့လာမှုများ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography (SPECT) တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူ MDD အတွက် dopaminergic စနစ်အားဆန်းစစ်နှင့်ကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြ , ။ dopamine D ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေး2 /3အဲဒီ receptor (D2 / 3R) ရရှိနိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ MDD လူနာတိုးပွားလာ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် , psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီနှင့်အတူ MDD လူနာတစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲများတွင်အဖြစ်တိုးမြှင့် striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှု , ။ တိုးမြှင့် D2 / 3R ရရှိနိုင်မှု: D တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ2 /3receptors, အ radioligand တစ်ခုသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား Synaptic dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အဲဒီ receptor ၏တိုးလာဆှဖှေဲ့ ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများ MDD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုသရုပ်ပြအဖြစ်ထို့ကြောင့်, MDD အတွက်ပြောင်းလဲ dopaminergic function ကို၏သက်သေအထောက်အထားလည်း, equivocal ဖြစ်ပါသည် , ။ ဤအကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်တစ်ခုရှင်းပြချက်သည်ဤလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့လူမျိုးကွဲအခြေခံလိမ့်မယ်အရာပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အတူ MDD လူနာအပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက TRD Non-ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါမှဆွေမျိုးကွန်ရက်များကိုထိန်းညှိစိတ်ဓါတ်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုလေးနက်တဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအကြံပြုထားသည် , , အရာ TRD လူနာတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကျရောဂါရောင်စဉ်၏အဆိုးဆုံးအဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ TRD လူနာမကြာခဏပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် anhedonic နှင့် psychomotorically နှောင့်နှေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအချိန်ကာလအများစု serotonergic သို့မဟုတ် noradrenergic မူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးအဖြစ်ထို့အပွငျ, TRD လူနာအတွက်မူမမှန်လျှော့ချ dopaminergic အချက်ပြနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ယနေ့အထိ, D2 / 3R binding striatal TRD လူနာအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, TRD လူနာလျော့နည်းသွား dopaminergic ဂီယာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိမရှိအဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ပြင်းထန် TRD လူနာအတွက် binding striatal D2 / 3R စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ binding တိုးလာ D2 / 3R အားဖြင့်ထင်ဟပ်။ ကျနော်တို့2ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ3TRD လူနာအတွက် binding striatal D6 / 15 ၏ Vivo တိုင်းတာအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒါ့အပြင်2TRD လူနာနှင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ symptomatology ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ striatal D3 / 11R ရရှိနိုင်မှုအပေါ် antipsychotics ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
ကျနော်တို့6TRD လူနာ antipsychotics အပေါ် 11 TRD လူနာ (TRD AP အုပ်စုကို) နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမအဘို့အလိုက်ဖက် 15 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များပါဝင်သည်။ TRD လူနာ Tilburg အတွက်အမ်စတာဒမ်နှင့် St. ဧလိရှဗဆေးရုံအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ (AMC) ၏စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဦးစီးဌာနမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုအမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ် (METC AMC) ၏ AMC ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Ethical ကော်မတီနှင့်, စိန့်အယ်လီဇဘတ်ဆေးရုံကြီး (METC စိန့်ဧလိရှဗ) ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။ TRD နှင့် TRD AP ဘာသာရပ်များအဘို့အပါဝင်စံခဲ့ကြသည်: 18 နှင့် 65 နှစ်အကြား (ဈ) အသက်အရွယ်, (ii) စုစုပေါင်း Hamilton ကစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး (Ham-D) ≥18; (iii) Diagnostic အဆိုအရ MDD ၏မူလတန်းရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-IV) စံ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, DSM-IV များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID) ကအကဲဖြတ် ။ အလွန်ဆိုးရွားသည့် TRD လူနာများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် (၂) နှစ်နာမကျန်းသောလူနာများသာပါ ၀ င်သည်။ (၁) ကွဲပြားခြားနားသောခေတ်သစ်စိတ်ကျဆေးနှစ်မျိုး (အနည်းဆုံးစိတ်ကြိုက်စိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးနှစ်မျိုး) ကိုခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူသူ (ရွေးချယ်သည့် serotonin ပြန်လည်နို့တိုက်ကျွေးသော inhibitors၊ serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors) သို့မဟုတ် noradrenergic နှင့်တိကျသော serotonergic anti-depressants) နှင့် (ii) သုံးမျိုးသုံးစိတ်ကြွဆေးနှင့် (၃) နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်သော monoamine oxidase (MAO) inhibitor နှင့် ()) အနည်းဆုံးနှစ်နိုင်ငံ electroconvulsive ကုထုံး (ECT) ၏အနည်းဆုံး ၆ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များမှာ (၁) ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ (ii) စိတ်ကြွရောဂါ, (၃) schizophrenia သို့မဟုတ် MDD နှင့်မသက်ဆိုင်သောစိတ်ပညာ၏သမိုင်း၊ ()) လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်းအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၊ နှင့် (v) လူမှုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ။ စိတ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါမရှိခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် DSM-IV ရောဂါများအတွက်စနစ်တကျပြုလုပ်ထားသောလူတွေ့မေးမြန်းမှုဖြင့်ကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် ။ ကျန်းမာသင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှစိတ်ရောဂါနာမကျန်းတဲ့မိသားစုသမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Ham-D ကိုအသုံးပြုခဲ့  နဲ့ Montgomery Asberg စီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး (Madre)  စိတ်ကျရောဂါပြင်းထန်မှုများကိုတွက်ချက်ရန်။ အဆိုပါ Maudsley ဇာတ်စင် Method ကို (MSM) ကုသမှုခုခံ၏အဆင့်ကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် ,။ အဆိုပါ MSM ရမှတ်အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့ parameters တွေကိုလည်းပါဝင်သည်; လက်ရှိစိတ်ကျရောဂါဇာတ်လမ်းတွဲ, လက္ခဏာပြင်းထန်မှု, နှင့် (GAF) ရမှတ် functioning ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်တိုင်းတာအဖြစ်လည်ပတ်၏အဆင့်ကြာချိန်။ ကျနော်တို့ Fekadu et al ရည်ညွှန်းသောဤလက်တွေ့ variable တွေကိုတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်း .
လူပျိုဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်မှု computing Tomography protocol ကို
SPECT စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တစ် 12-detector Single-အချပ်ဦးနှောက်-ဆက်ကပ်အပ်နှံစကင်နာ (Neurofocus, Inc, Medfield MA, USA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များအတွက် striatal D2 / 3R binding အလားအလာ (BP ၏တိုင်းတာခြင်းခံယူND) ကိုရွေးချယ် D2 / 3R ရန်သုံးပြီး [123ကျွန်မ] iodobenzamide ([123ကျွန်မ] IBZM) ။ ကျနော်တို့အရင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသော bolus / စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည် technique ကို, အသုံးချ , ။ SPECT အချက်အလက်များကို radioligand ၏ပြုတ်ရည်ပြီးနောက် 60 မိနစ်စတင် 120 မိနစ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီပြောင်းလဲ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကတည်းကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဘာသာရပ်များ၏နေ့မှာအရက်, ကော်ဖီနှင့်စီးကရက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်မပြုထားခဲ့ကြသည် , .
SPECT ဒေတာ 3-D ကို mode မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖော်ပြထားသကဲ့သို့အားလုံးရုပ်ပုံများကို attenuation ဆုံးမခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည် ။ အရေအတွက်အားဖြင့်, စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ဒေသ (Roi) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Fixed ROIs အဆိုပါ striatum များအတွက်နေရာချထားခြင်းနှင့်, တစ်ဦးကိုကိုးကားသည်အတိုင်း, occipital cortex ခဲ့ကြသည် ။ striatal ဆိုလိုခြင်းနှင့် occipital စည်းနှောင်ညာဘက်ထံမှပျမ်းမျှနှင့် ROIs ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုတာ။ ထို့နောက်ကို BPND သတ်သတ်မှတ်မှတ် Non- တိကျတဲ့စည်းနှောင် ((occipital cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှု striatum အတွက်စုစုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု) / occipital cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှု) မှတိကျတဲ့၏အချိုးအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်လက်တွေ့အချက်အလက်များကိုမျက်စိမမြင်သူစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ (CP) မှဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်သူအချင်းချင်းသဘောတူညီမှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်စာရေးသူ (CP နှင့် BdK) နှစ် ဦး သည် BP အားလွတ်လပ်စွာဆန်းစစ်ခဲ့သည်ND တကျိပ်ဘာသာရပ်များအတွက်။ အဆိုပါ intraclass ဆက်စပ်မှုကိန်း (ICC က) နှစ်ဦးစလုံးအဆင့်သတ်မှတ်သူအကြားတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘောတူညီချက်ညွှန်ပြပေးသောညာဘက် striatum များအတွက် left- နှင့် 0.94 များအတွက် 0.95 ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်အတွက်ကွာခြားချက်များ, Ham-D နှင့် Madre ရမှတ်achi-စတုရန်းစမ်းသပ်သုံးပြီးကှဲလှဲတဲ့တလမ်းတည်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) နဲ့အကဲဖြတ်ခြင်း, ကျား, မကွဲပြားမှုခဲ့ကြသည်။ TRD, TRD AP နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအကြား striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှု၏နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခု ANOVA နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးအနည်းဆုံးသိသိသာသာ Difference (LSD) ANOVA Post-hoc စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း, D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု TRD AP လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားနှင့် TRD AP နှင့် TRD လူနာအကြား, TRD လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုအသက်အရွယ်အားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ကတည်းက  နှင့်ကျား, မ အဆိုပါအုပ်စုတွင် covariates covariance တစ်တလမ်းတည်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANCOVA) ကို အသုံးပြု. လေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်ကျနော်တို့ဒါ့အပြင်ထိုအ variable တွေကိုပါဝင်သည်။ 0.05 ၏တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုအမြီးဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးကိုအရေးပါမှုအဆင့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
TRD, TRD AP နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (အသက်နှင့်ကျားမအဘို့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 1) ။ Ham-D နှင့် Madre ရမှတ်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအကြားစိတ်ကျရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုမရှိခြားနားချက်ညွှန်ပြပေးသော TRD နှင့် TRD AP လူနာအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ TRD လူနာ MSM ရမှတ် 11.8 (± 1.0) တို့နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ကုသမှုခုခံ၏မြင့်မားသောအဆင့်ညွှန်ပြပေးသော TRD AP လူနာ 11.8 (± 0.5) အတွက်ဆိုလို။ တစ်ဦးချင်းစီ TRD နှင့် TRD AP လူနာများ၏ဆေးကုသမှုအသုံးပြုမှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်အစီရင်ခံနေသည် စားပွဲတင် 2.
TRD, TRD AP နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ။
TRD နှင့် TRD AP လူနာများတွင်အသုံးပြု Psychopharmacological မူးယစ်ဆေးဝါးများ။
ကြောင်း dopaminergic neurotransmission သိသိသာသာ TRD လူနာအတွက်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရအကြံပြုခြင်း TRD လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားယုတ် striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုမရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p = 0.75) (ရှိခဲ့သည်စားပွဲတင် 1, ပုံ 1 နှင့် and2) .2) ။ စံသတ်မှတ်ထားသောသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားသည် ၀.၂၁ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် TRD AP အုပ်စု၏ပျမ်းမျှ D0.21 / 2R ရရှိနိုင်မှုသည် TRD (p = 3) နှင့်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု (p <0.001) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ TRD AP လူနာများအသုံးပြုသော antipsychotics ဆေးများသည် dopamine receptor antagonists များဖြစ်သဖြင့်ဤသည် striatal D0.001 / 2Rs ၏ခိုင်မာသောနေရာတွင်ရှိသည်။စားပွဲတင် 1, ပုံ 2; 50% ± 20% ၏ထေို) ။ အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမအဘို့ဆုံးမပဲ့ပြင်သိသိသာသာသည်ဤရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး။
D2 / 3R ရရှိနိုင်မှု၏ Transversal ပုံရိပ်တွေ။
TRD, TRD AP နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအဘို့အ Striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှု။
ဤသည်မှာပဏာမလေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးရန်, TRD အတွက် striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးလေးလုံလောက်သောကွဲပြားခြားနားသောစိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏ကုသနည်းများနှင့်နှစ်နိုင်ငံ Insight web studio ၏အနည်းဆုံး2အစည်းအဝေးများမှ Non-တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထက်ပို6နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးနာမကျန်းကြာချိန်နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဘို့အအရည်အချင်းပြည့်မီသောပြင်းထန် TRD လူနာတစ်မူထူးခြားသောအုပ်စုပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ dopaminergic neurotransmission သိသိသာသာ TRD အတွက်ပြောင်းလဲမပေးကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး TRD လူနာ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုမရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။ ထို့ပြင် TRD AP ဘာသာရပ်များသိသိသာသာသည်ဤ atypical antipsychotics အားဖြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2% ဖြစ်ခန့်မှန်းခြေ) D3 / 2Rs တစ်သိသိသာသာထေိုထင်ဟပ်သော TRD ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှစ်ဦးစလုံးမှ striatal D3 / 50R ရရှိနိုင်မှုဆွေမျိုးလျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီ receptor ထေိုငျတှငျဤကြီးမားသောခြားနားချက်များရှိနေသော်လည်းစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ TRD AP ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးတက်မခံခဲ့ရပါ။
ယခင်ကကြောင့်အထူးသဖြင့် TRD dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည် ။ TRD ကွန်ရက်များကိုထိန်းညှိစိတ်ဓါတ်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုလေးနက်တဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက , ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပိုပြီးပြင်းထန် dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြသခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောတိုးလာ D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုအဖြစ်မျှော်မှန်းထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ TRD လူနာ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုမရှိသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်လေ့လာသည်။ ကျနော်တို့ကဒီတွေ့ရှိချက်အဘို့အများအပြားရှင်းလင်းချက်တင်ပြသည်။ ပထမဦးစွာကတခြားလေ့လာမှုတွေ psychomotor နှောင့်နှေးလူနာ D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအစီရင်ခံတင်ပြ , ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာငါတို့သည်ထိုအ TRD လူနာ psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီမှသာအတန်အသင့်ခံစားခဲ့ရပြသပေးသော psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီတိုင်းတာဖို့ Ham-D ကိုရမှတ်၏ပစ္စည်းကို 8 (0 မှအကွာအဝေး 4) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောလက်ညှိုးကိုနှိပ်တာဝန်အဖြစ်မော်တာဉာဏ်ရည်မမီတိုင်းတာရန်ကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့စမ်းသပ်မှုကင်းမဲ့ ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေလျော့နည်း psychomotorically နှောင့်နှေးယခင်လေ့လာမှုများထက်သော option ကိုဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး , ။ ဒုတိယအချက်မှာပစ္စုပ္ပန်နမူနာ TRD လူနာအတွက်သာ Mao-inhibitors မှ non-တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ Mao-inhibitors dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်အဖြစ်က hypodopaminergic ပြည်နယ်တည်ရှိစေခြင်းငှါ, Mao-inhibitors ဖို့ကောင်းတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုနဲ့အထူးသဖြင့်လူနာတစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲအတွက်တွေးဆနိုင်ပါတယ်။ Mao-inhibitors မှ Non-ဖြေဆိုသူလက်ရှိနမူနာအတွက် striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုမကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ သို့သော်ဤအယူအဆသေးစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ တတိယအချက်ပစ္စုပ္ပန်နမူနာ TRD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအကြား striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့အလွန်သေးငယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာကသို့သော်စံချိန်စံညွှန်းမီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (ဃ = 0.21) သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုအနည်းဆုံး 343 လူနာ (0.8 တစ်စာရင်းအင်းပါဝါမှာ) သိသိသာသာအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်သရုပ်ပြထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းဆိုလို။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်ပိုမိုကြီးမားလေ့လာမှုများ TRD-လူနာကဒီအဖွဲ့ခွဲများတွင်တိုးမြှင့် D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည်သောအခွင့်အလမ်းအနိမ့်စေခြင်းငှါပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်လည်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုဆွေမျိုးမကွဲပြားမှုသတင်းပေးပို့ပေးသောအများအပြား MDD လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ , ။ သို့သော်ထိုအလေ့လာမှုများအများအားဖြင့်ကုသမှုအထိခိုက်မခံလူနာများနှင့်ထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ် hampers ရာနာမကျန်းတဲ့တိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့အုပ်စုများပါဝင်သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, TRD AP ဘာသာရပ်များပြသခဲ့သည်သိသိသာသာကို (antipsychotics အားဖြင့် D2 / 3Rs ၏ထေိုထင်ဟပ်သော) TRD ဘာသာရပ်များမှ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုဆွေမျိုးလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါ TRD AP အုပ်စုတွင်ပစ္စုပ္ပန် D2 / 3R ထေို (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50%) schizophrenia လူနာ atypical antipsychotics ၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါသည် , ။ ကျွန်တော်တို့ဟာလုံလောက်တဲ့ထေိုအဆင့်ဆင့်မှာသောဤအုပ်စုများအကြားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြသပြီးကတည်းက, ဒီ atypical antipsychotics နှင့်အတူ monotherapy သို့မဟုတ်တိုးပွားဖြစ်စေ, ဤ antipsychotics ဒီလိုလူနာအတွက် tapered နိုင်အကြံပြုခြင်း, ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ် TRD အုပ်စုတွင်လက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့်မပေးပါဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အရေးကြီးတာက, အ TRD AP လူနာကအသုံးပြုအားလုံး antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများနျဖိုးထား 5-HT ရှိ2A စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်စေရန်ပြသထားပြီးဖြစ်သောအဲဒီ receptor ထေို ။ အဆိုပါ 5-HT2A ဒီလိုလူနာအတွက်အဲဒီ receptor ထေိုထို့ကြောင့်ဒီအုပ်စုတွင်လက်တွေ့တိုးတက်မှုမရှိခြင်းကိုရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ non-တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှင်းပြချက်သည်ဤ atypical antipsychotics အားလုံး dopamine အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအများအပြားလေ့လာမှုများ pramipexole နဲ့တူတွဲဖက် dopamine agonists TRD လူနာအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းပြသ , ,  အရာ dopamine agonist တိုးပွားကုထုံးသည်လည်းပစ္စုပ္ပန်ပြင်းထန် TRD လူနာအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ ကျနော်တို့ dopamine D2 /3receptors တိုက်ရိုက်ဆွဦးနှောက်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များတိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါမှနျး .
psychotic စိတ်ကျရောဂါအတွက် atypical antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုနေသော်လည်း , , (Non-psychotic) TRD လူနာများတွင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အနိမ့်ထိုးတိုးပွားထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည် , ။ သို့သော်ဤတိုးပွားလေ့လာမှုများအတွက် TRD အများအားဖြင့်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏နှစ်ခုသာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ non-တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပစ္စုပ္ပန် TRD လူနာဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောနောက်ထပ်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ TRD လူနာမလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးရှိစေခြင်းငှါအရာ atypical antipsychotics မှ non-တုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းပြရသောသုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့် Mao-inhibitors အဖြစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ပိုအတန်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်တစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးကျိန်းသေပြင်းထန် TRD အတွက် antipsychotic တိုးပွားဆေးခန်းအသုံးဝင်သည်ရှိမရှိကောက်ချက်ချရန်လိုအပ်သောလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့လက်ရှိလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်အသိအမှတျပွု။ ပထမဦးစွာအများအပြားလေ့လာမှုများ striatum D2 /3receptors ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသော intracellular လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်လည်ပတ်ရသော dopamine D1 receptors မသာပါဝင်သောပြသ ။ အဆိုပါ dopamine D1 အဲဒီ receptor ကိုလည်း dopamine D1 အဲဒီ receptor ပါဝင်သည်သော D5 ကဲ့သို့ subfamily ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။ D1 receptors ဟာသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းပိုမိုပျံ့နှံ့နေသည်သော်လည်း Striatal D2 receptors တိုက်ရိုက် nigrostriatal output ကိုလမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ ။ ဤအအလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းတိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုနျူကလိယ၏အခွံထဲမှာ D1 နှင့် D2 receptors ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation ဆိုလိုသည်မှာ dopamine ကမကထပြုခဲ့ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, လှုံ့ဆျောမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်တစ်ဦးသမဝါယမအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ် accumbens ကြောင်းသရုပ်ပြ ။ စိတ်ကျရောဂါကတည်းကအလုပ်မဖြစ်တဲ့ဆုလာဘ် / စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် , ဤတွေ့ရှိချက် D1 receptors ၏ပြောင်းလဲစကားရပ် MDD လူနာအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးအဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်အဘယ်သူမျှမကလူ့လေ့လာမှု MDD အတွက်မဟုတ်သလို TRD အတွက် striatal D1 ရရှိနိုင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Positron ထုတ်လွှတ်မှု Tomography (PET) radioligand [11ကို C] SCH23390 D1 ကဲ့သို့ receptors dopamine မှချည်နှောင် နှင့် receptors D5 တစ်ဦးပြောင်အတိုင်းအတာအထိ။ အဆိုပါ striatum အတွက် D5 receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး [အောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက11ကို C] SCH23390 binding အများစု D1 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ [11ကို C] SCH23390, ဒါပေမယ့်လည်းကဲ့သို့အခြား ligands [11ကို C] NNC 756  သို့မဟုတ် [11ကို C] SKF 82957  ထို့ကြောင့် MDD နှင့် TRD လူနာ striatal dopamine D1 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာသုံးခြောက်လထွက် TRD လူနာ striatal D2 / 3R ရရှိနိုင်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြလိမ့်မယ်ထားတဲ့စိတ်ကိုဆေးဝါးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီလိုလူနာတ striatum အတွက် Synaptic dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးသော Mao-inhibitor ကိုအသုံးပြု ။ ထို့ကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှု radioligand နှင့်အတူတိုးပွားလာယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်ဒီလူနာအတွက် striatal D2 / 3R ရရှိမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။ သို့သော်ဤလူနာများ၏ဖယ်ရလဒ်များကိုမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့, dopamine ပြင်းအားအတွက်ကြီးမားသောတိုးအဆိုပါ [လျှော့ချရန်လိုအပ်နေပါသည်123ကျွန်မ] IBZM Vivo အတွက် binding ။ နောက်ထပ် TRD လူနာတစ်ဦး noradrenergic နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် serotonergic လက္ခဏာ (NaSSA) ဖြစ်သော mirtazapine ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ mirtazapine dopamine receptors မဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်ပေမယ့်က 5-HT ၏ activation အားဖြင့် prefrontal နှင့် occipital cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ပါဘူး1A အဆိုပါα2-adrenergic receptors ၏ receptor နှင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း , ။ သို့သော် mirtazapine striatal D2 / 3R binding mirtazapine အသုံးပြုပြောင်းလဲမဟုတ်ပါအကြံပြုထားတဲ့ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးကြောင်းအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ [အတူတတိယ123ကျွန်မ] IBZM ကျနော်တို့ Vivo အတွက် striatal D2 / 3Rs တိုင်းတာရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ သို့သော်အကျိုးဆက်ကျနော်တို့ quantified မရနိုငျသော TRD အတွက်အပို-striatal D2 / 3Rs အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နှင့်အတူတစ်အဖွဲ့ခွဲကိုယ်စားပြုမယ်ရာ psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် anhedonia တူသော symptomatology အပေါ်အခြေခံပြီး TRD-လူနာ select လုပ်မရ D2 / 3R ရရှိမှုလျော့နည်းသွားသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့လက်ရှိလေ့လာမှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးပြင်းထန်စွာကုသမှုကိုခံနိုင်ရည် MDD လူနာ striatal D2 / 3R အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု detect မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဤသည် TRD ပြောင်းလဲ dopaminergic ဂီယာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအယူအဆဆန့်ကျင်ဘက်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ပြင်ရလဒ် antipsychotics နှင့်အတူအပိုဆောင်းကုသမှု TRD အတွက် (ထို antipsychotics ဖွငျ့ကြောင့် D2 / 3R ၏ထေိုမှ) striatal D2 / 3R အဲဒီ receptor ရရှိမှုလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကဤ TRD AP လူနာလျှော့ချမဟုတ်ကြောင့်အရေးကြီး, ဤကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာမူးယစ်ဆေးဝါးများအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျန်ရှိနေခဲ့ကြသူလူနာများကိုအတွက် atypical antipsychotics တစ်ဦးလက်တွေ့အားသာချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်လျက် SPECT-စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပါဝင်များအတွက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုပေးဘို့ Elsmarieke ဗန်က de Giessen နှင့် Evelien Zoons အသိအမှတျပွုနှင့်လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး။ ထောက်ပံ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု: EvdG, EZ ။
ဒေါက်တာ HG Ruhéတစ် NWO / ZonMW VENI-Grant က #016.126.059 ကထောက်ခံသည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ Greden JF (2001) ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ရောဂါနှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 62 ပျော့ပျောင်း 1626-31 ။ [PubMed]
2 ။ စွန်ပလွံ AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, Nierenberg AA ကို, Stewart က JW, et al ။ တဦးတည်းလိုအပ်စိတ်ဓာတ်ပြင်ပလူနာသို့မဟုတ်အများအပြားကုသမှုခြေလှမ်းများအတွက် (2006) ထူးခြားသောနှင့်ရေရှည်ရလဒ်များ: တစ်ကြယ်စင်: D အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 163: 1905-1917 ။ [PubMed]
3 ။ စိတ်ကျရောဂါမမှန်၏ Ustun တီဘီ, Kessler RC (2002) ဂလိုဘယ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး: ကြာချိန်များ၏ပြဿနာ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 181: 181-183 ။ [PubMed]
4 ။ Cusin ကို C, Iovieno N ကို, Iosifescu DV, Nierenberg AA ကို, Fava M က, et al ။ ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် pramipexole တိုးပွား၏ (2013) ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 74: e636-e641 ။ [PubMed]
5 ။ Inoue T က, Kitaichi Y ကို, Masui T က, Nakagawa S က, Boku S က, et al ။ ပွင့်လင်းလေ့လာမှု: ဇာတ်စင် 2010 ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက် (2) Pramipexole ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 34: 1446-1449 ။ [PubMed]
6. Lattanzi L, Dell'Osso L, Cassano P, Pini S, Rucci P, et al ။ ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါအတွက် (2002) Pramipexole: တစ် ဦး ကို 16 ရက်သတ္တပတ်သဘာဝလေ့လာမှု။ စိတ်ကြွ Disord 4: 307-314 ။ [PubMed]
7 ။ Dunlop BW, Nemeroff သမဝါယမ (2007) စိတ်ကျရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 64: 327-337 ။ [PubMed]
8 ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (1994) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, 4th ed: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါနှိပ်ပါ။
9 ။ Dunlop BW, Nemeroff သမဝါယမ (2007) စိတ်ကျရောဂါ၏ pathophysiology အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 64: 327-337 ။ [PubMed]
10 ။ Ruhe HG, Visser KD, Frokjaer VG, Haarman CM, Klein ကို C, et al ။ စိတ်ကျရောဂါမမှန်၏ (2014) မော်လီကျူးပုံရိပ် စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်ပေနှင့် SPECT, တွင်း Boer ဂျေ; ed: Springer Verlag, စစ 93-172 ။
၁၁။ D'haenen HA, Bossuyt A (11) dopamine D1994 receptors တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်မှုတွက်ချက်ခြင်း tomography ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2: 35-128 ။ [PubMed]
12 ။ Shah က PJ, Ogilvie အေဒီ, Goodwin က GM က, Ebmeier KP (1997) စိတ်ကျရောဂါအတွက် binding dopamine D2 ၏လက်တွေ့နှင့် psychometric Correlate ။ Psychol Med 27: 1247-1256 ။ [PubMed]
13 ။ Ebert: D, Feistel H ကို, Loew T က, Pirner တစ်ဦးက (1996) Dopamine နှင့်စိတ်ကျရောဂါ-striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor SPECT လက္ခဏာကုထုံးမီနှင့်အပြီး။ Psychopharmacology (Berl) 126: 91-94 ။ [PubMed]
14 ။ Meyer JH, McNeely သူ, Sagrati S က, Boovariwala တစ်ဦးကမာတင် K သည်, et al ။ တစ်ဦး [2006C] raclopride positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: မော်တာဉာဏ်ရည်မမီနှင့်အတူအဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် (2) ဓာတ်လှေကား putamen: D (11) အဲဒီ receptor binding အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 163: 1594-1602 ။ [PubMed]
15 ။ Parsey RV, Oquendo MA, Zea-ပှနျး Y ကို, Rodenhiser J ကို, Kegeles LS, et al ။ (2001) Dopamine: D (2) အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 50: 313-322 ။ [PubMed]
16 ။ ယန် YK, Yeh TL, Yao အဘိဓါန် WJ, Lee က ih, Chen က PS, et al ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါ-dual-အိုင်ဆိုတုပ် SPECT လေ့လာမှုနှင့်အတူလူနာအတွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေး (2008) သာ. ကွီးမွတျရရှိနိုင်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 162: 230-235 ။ [PubMed]
17 ။ Konarski JZ, ကနေဒီ SH, McIntyre RS, Rafi-Tari S က, Soczynska JK, et al ။ စိတ်ဓာတ်ကျဘာသာရပ်များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်, နာမကျန်းပြင်းထန်မှုနှင့်အသက်အကြား (2007) ဆက်ဆံရေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 155: 203-210 ။ [PubMed]
18 ။ et al Paillere Martinot ML, Martinot JL, Ringuenet: D, Galinowski တစ်ဦးက, Gallarda T က။ ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါနှင့် transcranial သံလိုက်ဆွတုန့်ပြန် (2011) အခြေခံဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်။ Neuropsychopharmacology 36: 2710-2719 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ: ပထမဦးဆုံးကို MB (2012) DSM-IV-TR ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorders, သုတေသနဗားရှင်း, လူနာ Edition ကိုများအတွက်လက်တွေ့အင်တာဗျူးစနစ်ကျသော။
20 ။ Hamilton က M ကို (1960) စိတ်ကျရောဂါများအတွက်တစ်ဦးကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေး။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု 23: 56-62 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Montgomery လုပ် SA, Asberg M (1979) ပြောင်းပေးဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းသစ်စိတ်ကျရောဂါစကေး။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 134: 382-389 ။ [PubMed]
22 ။ Fekadu တစ်ဦးက, Wooderson S က, Donaldson ကို C, Markopoulou K ကို Masterson B, et al ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက်ကုသမှုခုခံများကိုတွက်ချက်ရန် (2009) တစ်ဦးက multidimensional tool ကို: အ Maudsley ဇာတ်စင်နည်းလမ်း။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 70: 177-184 ။ [PubMed]
23 ။ Ruhe HG, ဗန် RG, Spijker J ကို, Peeters လက်ဗွေ, Schene AH (2012) ကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါအဘို့စင်မြင့်နည်းစနစ်များ။ တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ 137-35: J ကို disorders 45 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ [PubMed]
24 ။ Booij J ကို, Korn P ကို, Linszen DH, ဗန် Royen EA ၏, et al ။ Single-ဖိုတွန်ထုတ်လွှတ် tomography iodobenzamide အိုင်အိုဒင်း-1997 သုံးပြီး methylphenidate စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့် endogenous dopamine လွှတ်ပေးရေး (123) အကဲဖြတ်။ EUR J ကို Nucl Med 24: 674-677 ။ [PubMed]
25 ။ et al boot အီး, Booij J ကို, Zinkstok JR, Linszen DH, Baas F ကို။ တစ်ဦး [2010I] IBZM SPECT လေ့လာမှု: 2q22 ဖျက်မှု syndrome ရောဂါအတွက် binding (11) Striatal: D (123) အဲဒီ receptor ။ J ကို Psychopharmacol 24: 1525-1531 ။ [PubMed]
26 ။ Kaasinen V ကို, Aalto က S, Nagren K ကို Rinne Jo (2004) လူ့ striatum နှင့် thalamus အတွက်ကဖိန်းဓာတ်၏ Dopaminergic ဆိုးကျိုးများ။ Neuroreport 15: 281-285 ။ [PubMed]
27 ။ nevo ငါအရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ဟာမုန် M (1995) Neurotransmitter နှင့် neuromodulatory ယန္တရားများ။ Neurochem Int 26: 305-336 ။ [PubMed]
et al 28. Booij J, Tissingh, G, Boer GJ, Speelman JD, Stoof JC ။ (1997) [123I] FP-CIT SPECT သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါစောစောစီးစီးနှင့်အဆင့်မြင့် striatal dopamine Transporter တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသိသိသာသာကျဆင်းမှုကိုပြသသည်။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု 62: 133-140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Rinne Jo, Hietala J ကို, Ruotsalainen ဦး, Sako အီး, Laihinen တစ်ဦးက, et al ။ တစ်ပေလေ့လာမှု raclopride [1993C] နှင့်အတူ: (2) အသက်အရွယ်နှင့်အတူလူ့ striatal dopamine D11 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်လျှော့ချရန်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 13: 310-314 ။ [PubMed]
30 ။ Trainor ဘီစီ (2011) စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့် mesolimbic dopamine စနစ်က: လူမှုရေးအခင်းအကျင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ Horm ပြုမူနေ 60: 457-469 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ clozapine, risperidone နှင့် schizophrenia အတွက် olanzapine ၏ 1999-HT5 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ထေို၏ Kapur S က, Zipursky RB, Remington, G (2) လက်တွေ့နှင့်သီအိုရီသက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 156: 286-293 ။ [PubMed]
32 ။ Tauscher J ကို, Hussain T က, Agid အို Verhoeff NP, Wilson က AA ကို, et al ။ အခြားအ atypical antipsychotics ကနေကွဲပြားခြားနားမှု: (2004) dopamine D1 နှင့် D2 ၏ Equivalent ထေို clozapine နှင့်အတူ receptors ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 161: 1620-1625 ။ [PubMed]
33 ။ Celada P ကို, Puig M က, Amargos-Bosch ရဲ့ M က, Adele တစ်ဦးက, Artigas က F (2004) စိတ်ကျရောဂါအတွက် 5-HT1A နှင့် 5-HT2A receptors ၏ကုထုံးအခန်းကဏ္ဍ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience 29: 252-265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ ဟောရိ H ကို, Kunugi H ကို (2012) ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုတွဲဖက်ကုသမှုအဖြစ် pramipexole များ၏ထိရောက်မှုတစ် dopamine အဲဒီ receptor agonist: open-တံဆိပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး။ ScientificWorldJournal 2012: 372474 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ Izumi T က, Inoue T က, Kitagawa N ကို, Nishi N ကို, Shimanaka S က, et al ။ (2000) ပွင့်လင်း pergolide သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၏ကုသမှုနှင့် heterocyclic လက္ခဏာယဉ်စိတ်ကျရောဂါ။ 61-127: J ကို disorders 132 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ [PubMed]
et al 36. Leentjens AF, Koester J ကို, Fruh B, Shephard DT, Barone P ကို။ (2009) စိတ်ခံစားချက်နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် pramipexole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ Clin Ther 31: 89-98 ။ [PubMed]
37 ။ Farahani တစ်ဦးက, ဆက်စပ်မှု Cu (2012) psychotic စိတ်ကျရောဂါလိုအပ် antipsychotics သို့မဟုတ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ရှိပါသလား ပေါင်းစပ်ကုသမှုနှင့်အတူလက္ခဏာသို့မဟုတ် antipsychotic monotherapy နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 73: 486-496 ။ [PubMed]
38 ။ psychotic စိတ်ကျရောဂါများအတွက် Wijkstra J ကို, Lijmer J ကို, ဘာဂါ H ကို, Geddes J ကို, Nolen WA (2013) Pharmacological ကုသမှု။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ 11: CD004044 ။ [PubMed]
39 ။ Corya လုပ် SA, Williamson: D, ဆန်းဂါးဆို TM, Briggs SD, ဖြစ်ရပ်မှန် M က, et al ။ (2006) ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း olanzapine / fluoxetine ပေါင်းစပ်၏နှိုင်းယှဉ်, olanzapine, fluoxetine နှင့်ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါအတွက် venlafaxine ။ 23-364: ပူပန် 372 စိတ်ကျရောဂါ။ [PubMed]
40 ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်နယ်လ်ဆင် JC, Papakostas GI (2009) Atypical antipsychotic တိုးပွား: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေတစ် Meta-analysis သည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 166: 980-991 ။ [PubMed]
41 ။ Vallone: ​​D, Picetti R ကို dopamine receptors ၏, Borrelli အီး (2000) ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။ neuroscience Biobehav ဗြာ 24: 125-132 ။ [PubMed]
42 ။ Gerfen CR, Engber TM, မာဟန် LC, Susel Z ကို, Chase TN (1990) D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor-စညျးမဉျြးစညျးကမျး striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ 250: 1429-1432 ။ [PubMed]
43 ။ ဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1997 နှင့် D1 receptors ၏ Ikemoto S က, Glazier BS, မာဖီ JM, McBride WJ (2) အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience 17: 8580-8587 ။ [PubMed]
44 ။ Pizzagalli DA, ကေတီဟုမ်း AJ, Dillon DG, Goetz EL, Birk JL, et al ။ (2009) လျှော့ချ caudate နှင့်နျူကလိယကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူ unmedicated တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန် accumbens ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 166: 702-710 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Smoski MJ, Felder J ကို, Bizzell J ကို, အစိမ်းရောင် SR, Ernst M က, et al ။ (2009) ဆုလာဘ်ရွေးချယ်ရေးမြားတှငျပွောငျးလဲ၏ fMRI, မျှော်လင့်ခြင်း, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်တုံ့ပြန်ချက်။ 118-69: J ကို disorders 78 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ et al Plaven-Sigray P ကို, Gustavsson P ကို, Farde L ကို, Borg J ကို, Stenkrona P ကို။ (2014) Dopamine D1 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုလူမှုရေးအပြုအမူမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးက positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Neuroimage 102P2: 590-595 ။ [PubMed]
47 ။ et al ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Simpson N ကို, Kegeles L ကို, Parsey R ကို, Hwang DR ။ endogenous dopamine နှင့် D1999 radiotracer [1C] NNC 11 အကြားစည်းနှောင်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ (756) ပေလေ့လာမှုများ။ synapses 32: 93-109 ။ [PubMed]
48 ။ Palner M က, မက်ကော်မစ် P ကို, Park J ကို, Knudsen GM က, Wilson က AA ကို, et al ။ (2010) စနစ် catechol-O-methyl transferase တားစီးသည့် D1 agonist radiotracer R- [11C] SKF 82957 နိုင်ပါတယ်။ Nucl Med Biol 37: 837-843 ။ [PubMed]
49 ။ Mao inhibitors ၏ Yamada က M, Yasuhara H ကို (2004) လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ: ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အနာဂတ်။ Neurotoxicology 25: 215-221 ။ [PubMed]
50 ။ အဆိုပါ medial prefrontal နှင့် occipital cortex အတွက် noradrenergic အာရုံခံထံမှ dopamine နဲ့ noradrenaline ၏ Devoto P ကို, Flore, G, Pira L ကို, Longu, G, Gessa GL (2004) Mirtazapine-သွေးဆောင် corelease ။ EUR J ကို Pharmacol 487: 105-111 ။ [PubMed]
51 ။ Nakayama K ကို Sakurai T က, Katsu H ကို (2004) Mirtazapine 5-HT1A အဲဒီ receptor activation အားဖြင့် prefrontal cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res Bull 63: 237-241 ။ [PubMed]